Uhuru Kenyatta oo jeediyey hadal 'ka dhan ah' Soomaaliya, islamarkaana aad u hanjabay - Caasimada Online
Home Warar Uhuru Kenyatta oo jeediyey hadal ‘ka dhan ah’ Soomaaliya, islamarkaana aad u...
Uhuru Kenyatta oo jeediyey hadal ‘ka dhan ah’ Soomaaliya, islamarkaana aad u hanjabay
Nairobi (Caasimada Online) – Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa carabka ku adkeeyay sida ay dalkiisa uga go’an tahay in xuduudihiisa uu uga difaaco shisheeye kasta oo soo faro-galiya.
Waxaa uu digniin u jeediyay xoogag uusan magacaabin oo uu sheegay in aysan xushmeynayn madaxbanaanida dhuleed ee Kenya.
Hadalkan oo uu jeediyay shalay mar uu booqanayay keynta Boni ee ku taaalla deegaanka Lamu una dhaw xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa uu ku nuux-nuuxsaday in dalkiisa uusan marnaba aqbali doonin cid kasta oo sheegata qeyb ka mid ah dhulkiisa.
“Cidna kama aqbaleyno in ay sheegato lahaanshiyaha qeyb ka mid ah dhulkeena, sida aan u xushmeyno xuduuddaha dalalka kale ayaan sidoo kale ka filaynaa in xuduuddaheen dhuleed iyo badeed loo xushmeeyo,” ayu yiri madaxweyne Kenyatta.
Hadalkiisa ayaa loo fasiray in uu yahay farriin uu u dirayo Soomaaliya oo uu muran dhanka badda ah kala dhaxeeyo Kenya.
Dhanka kale, keynta Boni oo ku taalla xuduudda Soomaaliya ayaa ah mid ay gabbaad ka dhigteen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab, halkaasi oo ay ka soo qaadaan weerarada ay ka fuliyaam deegaannada Lamu, Garissa iyo Tana River.
Uhuru ayaa xusay in Kenya ay tahay dal nabadda jecel isla markaana ay dooneysa in nabad ay kula noolaato dalalka dariska ah ayna ka qeyb qaadatay howlaha nabadda loogu raadinayo dalalka kale.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhaxeeya muran dhanka badda ah oo muddo dheer soo jiitamayay.
Xiriirka labada dal ayaa mar gaaray heerkii ugu xumaa ilaa ay noqotay inay kala qaataan safaaradaha.
Balse dhawaan ayay labada dal ku heshiiyeen in safaaradaha dib loo furo isla markaana safiirada la isu soo celiyo.
Soomaaliya ayaa marar badan Kenya ku eedeeysay in ay faro-galin ku hayso arrimaheeda gudaha gaar ahaan Jubaland, taasi oo ay beenisay xukuumadda Nairobi.
Kenya ayaa waxaa Soomaaliya ka joogo ciidamo qeyb ka ah kuwa midowga Afrika ee AMISOM.